यी राशिका व्यक्तिले गर्दैनन् सकेसम्म पैसा खर्च, तपाईको कुन राशि ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यी राशिका व्यक्तिले गर्दैनन् सकेसम्म पैसा खर्च, तपाईको कुन राशि ?
Aएजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक मानिसको व्यक्तित्व उनीहरुको राशि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। कयौँ ज्योतिषशात्रका अनुसार तपाईको जति आधुनिक भएपनि यस कुरालाई नकार्न सकिदैन् की राशि अनुसार मानिसको ग्रह र नक्षत्रमा गहिरो प्रभाव पर्ने गर्दछ।
निर्माताहरुले नव–कलाकारप्रति गरिने व्य’वहारमा सुधार गर्नुपर्छ, वे’थितिविरुद्ध ड’टेर ल’ड्छु : साम्राज्ञी